talooyin | Almaschool's Blog
Dhibaatooyinka haysta ardeyda Soomaaliya ee wax ku barata dibedaha
Waa barnaamij aan kui indheenayo mushiladaha ardayda somaliyeed ee waxkabarata jaamacado kuyaala daafaha caalamka ,runtii markii ay meesha kabaxday dowladdii somaliyeed waxaa si xowli ah u’haajiray cuquushii somaliya kuwii ugu firfircoonaa waxaana jirta inyar in ay waxbrasho kusoobaxday inbadanna ay naflacarari kusoobaxeen ,waxaana jirta in ardayda somaliyeed ey kuhayaameen meelo kaladuwan oo caalamka kamid ah si loohelo waxbrasho ,waxaana jirta in qurbuhu uu leeyahay xanuuno farobadan iyo mashaakilo aan hal iyo labo aheen si aan waxa uga fahanno taas ayana barnaamijkaan ugu khaas yeelnay waxaana kamid ah
1- muskilad layiraahdo buufis
qeexiddiisa Buufis — marka ay kaa jajabsan tahay ama aad murugeysan tahay — waa dareen qof kasta saameyn karta. Waana caadi iney qeyb ka ahaato caadifada kala duwan ee dadka soo mara. Waana caadifo ama dareen faaiido leh. Waxeyn toban-jirka garansiisaa mushkilooyinka iyo sida dhibaatooyinka loo qaabili lahaa. Hadii murugada buufiska ay tagi weyso ama caqabad ay ku noqoto hawl maalmeedka, markaa waxaa qasab ah in buufiska la ogaado lana daaweeyo. Marka barbarka dareenkiisa uu qaso wax qabadkiisa, waxey taa tilmaameysaa in caadifad ahaan uu si daran u jaha wareersan yahay. Calaamadaha Buufisku leeyahay
waa mushkilad soo waajahday ardayda somaliyeed waliba kuwa wxkabranaya dalalka soogoraya sida asia iyo afrika marka ardaydu waxa ay kuriyoonayaa qarkooda sidii ay wax uga baranlahaayeen dalalka hor-umarka heesta oo kale sida u.s.a iyo yurubtakale .marka waa mushkilad ubaahan in laddeewayo .ardayduna ay ku qancaan waxa ilaah siiyay oo ah in ay waxbartaan xilii ay kuwii ladhashay aysan waxbarasho heesan waana in ay lasocdaan waxbrashadu in aysan qabiil ama mujtamac ama dowladda sikhaas ah uleh ee dareenka dhalinyarada dalkiisa iyo aqoontooda oo horumarsan aya lagu helikaraa
2. Ku-mashquulid Internet chatting
Waxay ardeydu ku mashquulaan paltalk iyo MSN ama Yahoo massenger. Waxa ay siiyaan waqtiyo qaali ah ,waxeena xiiseeyaan sidii ay uwada hadli lahaayeen qarabadooda ama asxbaatooda ,qaarna waxa ay kudhameeyaan waqtiyada qaaliga ah barashada gabdho ay isleeyihiin xiriir wacan layeesha ,mana fiican in arday uu kulumiyo sidaas time badan oo uu kubixikaro daalacashada kitaabada ama duruusta loogaabahanyahay .
3mushkiladda sadaxaad waxa ay ardayda kacabanayaa in aysan jirin heyado ama safarad lasocota umuurahooda halka ardayda kale ee waxlabartaan ay leeyihiin munadamaad kawalwala umuurahooda waxna kaqabta cabashadooda .sida baasaboorka iyo umuuro kale oo muhiim ah
4mushkilada 4aad waa in aysan jirin cid kabixineesa lacagta lagu bixyo shahaadada sare sida diyaarinta masatrereedka taasoo sababikarta in ardaydu ay kaniyadjabaan waxbrashada in ay siiwadaan ilaa heer sare sida p/hd iyo waxlamid ah .
5mushkiladda ugu mushkilado badan waa tan qabiilka waayo ardaydu waxaa laga rabay in ay udhaqmaan sidii in ay yihiin aqoonyahadii dalku uu lahaa ee mustaqblaka lafilanayay ,taas ma aysan dhicin ee waxaa dhacday in ay labaxaan urur kusaleesan gobaleesi iyo famil xitaa meelaha qaar waxaa dhacday in lagudoorto ra’isul dalabaha hanaan qabiila ama mabda’ sidaas oo kale ah ayna sii casriyeyeen qabiilkii xummaa ee dlaka iyo dadka dumiyay oo intii ardaydu ay kumidoobilaheed hanaan wanagsan oo dalka iyo dadka uwacan ayaa waxa dhacday in ay iskusaacidaan ama ay isku isbahestaan qabiilkaas ,,waxana fiican in mushkiladaha oo dhan laxaliyo tan waatan ugu khadarta badan ee ay kacabanayaan ardayda waxaana fiican in la illowbo oo la aaso qabiilka waayo tacliinta labaranayo mana fareeso sidaas ..
Waa ay socotaa .
Xasan M. Maxamuud Samatar (Albasri
Sidee loogu diyaargaroobaa u-dhoofitaanka dalka dibeddiisa?
Marka go’aan laga gaaro kulliyadda ardeygu geli doono iyo jaamacaddaba, uuna soo baxo ogolaanshuhu, wixii markaas xigaaba waa ardeygii oo jaamacaddii u soo dhoofa. Hase yeeshee dhoofka ka hor, waxaa lama-huraan ah in la sameeyo u-diyaargarow, waxaana ka mid ah qodobada muhiimka ah:
Gadashada buugaagta Soomaalida ku saabsan:
Maadaama aad dalkii ka tageyso waxaa habboon inaad horay u sii qaadato buugaag Soomaalida ka hadleysa dhinacyada sida joqoraafiga, taariikhda, siyaasadda, dhaqaalaha, dhaqanka, iwm. Waxay buugaagtani mustaqbalka kaa saacidi doonaan inaad tixraac ka dhigato marka ay timaaddo in qoraal Soomaalida ku saabsan laguu diro. Marka laga reebo xilliga daraasaddu socoto, waxay buugaagtaasi kuu noqon karaan wehel aad aqoon iyo madadaalaba ka hesho. Waxaa sii habboon inaad xoogga saarto kuwa ku qoran luqadda wax looga barto dalka aad u socoto (Carabi ama Ingriisi). Kuwa ku qoran luqadda hooyana labada dhanba waa loo adeegsan karaa. Haddaad u socoto dal af Ingriisi wax looga barto waxaa habboon inaad horay u sii qaadato qaamuusyada ‘Aasaasi’ ee English-Somali iyo kan kale ee Somali-English. Hase yeeshee waxaa ardeyga u habboon inuu is baro siduu u adeegsan lahaa qaamuusyada ingiriiska isku fasiraya sida Oxford.
Waa wax iska caadi ah in qof kasta oo dalka dibeddiisa u socdaalayo uu soo iibsado boorsooyin uu ku rito alaabtiisa, hase yeeshee waxaa bidhaamin u baahan nooca boorsooyin ee muhiimka ah. Tiraday doonaanba ha la ekaadaan boorsooyinkaadee, waxaa talo muhiim ah in mid ka mid ah boorsooyinkaagu ay ahaato mid yar oo gacanta lagu qaadan karo oo aad isugu geyso dhammaan dokumitiyadaada sida shahaadada dugsiga sare ama tan jaamacadda, iyo warqadaha kale ee muhiimka ah, waana inaan lagu darin boorsadaas kuwa xamuulka gelaya oo aan la hubin inaad dib u heli doonto iyo in kale
Ardey Soomaali ah oo Pakistan waxbarasho jaamacadeed u soo raadsaday ayaa shahaadadii jaamacadda ee rasmiga ahayd ee uu ka qaatay Jaamacadda Ummadda uu ku riday boorso weyn oo qeybta xamuulka soo gashay. Markuu Pakistan yimid ayaa nasiibdaro boorsadii la waayay. Dhammaan waxyaabaha boorsada ku jiray oo u badnaa dhar iyo buugaag waxay ahaayeen kuwo laga soo kabsan karay, marka laga reebo shahaadada. Nasiib wanaag qiyaastii toddobaad kadib ayaa la helay boorsadii.
Sidoo kale ardey Pakistan ka tegay oo fasax dalkii ku gaaray ayaa soo-noqodkiisii boorso weyn oo uu kaligeed ka watay uu isaga soo riday tikidhkii Dubai illaa Karachi ahaa ee uu ku soo noqonayay. Shaqaalihii garoonka ayaa la marsiin waayay in la furo boorsada ninkaas, wuxuuna qarka u istaagay inuu tikidh cusub goosto ama lagu celiyo Soomaaliya, hase yeeshee nasiib wanaag markii dambe ayaa laga oggolaaday inuu la soo baxo tikidhkii isagoo si adag loo ilaalinayo.
Dalka Pakistan iyo dalal kaleba waxaa la karantiilaa dadka lixdii maalin ee ugu dambeysay soo joogay qaaradaha Afrika iyo Laatiin Ameerika. Siday sheegto Hay’adda Caafimaadka Adduunka ee WHO, waxaa dadkaasi looga cabsi qabaa inay qabaan cudurka ‘Cagaarshowga’. Sidaasi darteed waxaa habboon in qofkii Pakistan u soo socda uu horay u soo qaato buugga la siiyo dadka tallaalka qabo, iyadoo ay tahay in buggaas la bixiyo muddo 10 maalin ka hor maalinta aad Pakistan imaneysid. Haddiise aad ku guuldarreysato inaad buugaas la timaaddo, waxaa laga yaabaa inay muddo 1-6 cisho ah kugu hayaan cusbitaal laysku karantiilo. Inta aad ku jirto cusbitaalkaas wax daawo ah ama baaritaan ah kuguma sameynayaan, balse waxay eegayaan in calaamadaha cudurkaasi kaa soo daahiraan.
Hadda waxaad soo gaartay garoonkii diyaaradaha, iska hubi in shaabadda ‘dal-ka-bixid’ ku dhacday baasaboorkaaga, waayo haddii taas la dhayalsado ma caddaaneyso dalkii aad ka soo socdaashay, waxaana ardey badan lagu qabsaday arrintaas.
Marka ardeygu dayuuradda ka soo raaco meel ka tirsan dalka Soomaalida, ee ku-hakasho ku soo maro magaalada Dubai, waxa kaliya ee uu sugaaba waa diyaaraddii u qaadi lahayd dalka Pakistan. Markaad soo raacdo diyaaradda kuu soo qaadeysa Pakistan waxay shaqaalaha diyaaraddu kuu qeybin doonaan foom la buuxinayo oo ardeyda badankood khalkhal ku rida. Su’aalaha ugu badan ee cabsida keena ayaa ah:
* Lixdii maalin ee ugu dambeysay ma soo joogtay Afrika ama laatiin Ameerika?
* Sheeg cinwaanka meesha aad ku degeyso Pakistan.
* Intee ayaad joogeysaa Pakistan?
Isku day inaadan faranixin, waayo su’aalahaasi waa kuwo iska caadi ah. Su’aasha koowaad waxay la xiriirtaa buugga caafimaadka ee aan horay kaga soo hadalnay. Haddii aad ka timid Geeska Afrika ku qor meeshaas “haa”. Haddaadan buugga caafimaadka wadan ciqaabta ugu weyn ee aad mudan karto waa inaad cusbitaalkaas ku jirto 1-6 cisho. Su’aasha labaad waxaa habboon inaad horay u soo qoroto cinwaanka qofka aad ku degi doontid, haddiise aadan garaneyn waxaad ku qori kartaa magaca jaamacadda aad wax ka baran doontid. Su’aasha 3aad waxaad kaga jawaabi kartaa ‘3 ama 4 sano’ waa haddii fiisaha aad wadato yahay mid ardeynimo. Muddada ku qoran baasaboorka ee saddexda bilood ah waxay ka tarjumeysaa in fiisahani loogu talo galay inaad dalka ku soo gasho.
WQ. Axmed Ugaas
Sidee loo xushaa kulliyad, jaamacad iyo dalka aad wax ka baraneyso?
Dhowr iyo tobankii sano ee ugu dambeeyay, shacabka Soomaaliyeed si aad ah ayuu ugu baahay dunida daafaheeda. Dadkaasi dalka dibedda uga baxay waxaa ka mid ah ardey fursado waxbarasho sare baadi-goobeysay. Maadaama dalalka Yurub iyo Mareykanka dal-ku-galkoodu aad u adag yahay, qiimaha jaamacadahooduna aan la goyn karin, waxay Soomaalidu isku shubeen dalalka Aasiya iyo kuwo ka tirsan qaaradda Afrika.
Shaki kuma jiro in qof kasta oo dalkiisa ka socdaala uu dhib iyo dheefba magan u yahay. Dheef uu qurbaha ku helaa waxay kaga qiimo badan tahay kumanyaal uu hoygiisa ku haystay, dhib soo wajahaana wuxuu uga nugul yahay markuu dalkiisii joogay. Qoraalkani wuxuu xoogga saari doona fursadaha u bannaan dhallinta dhaqaale ahaan awoodi karta inay dalka dibeddiisa wax ku bartaan, gara ahaan Pakistan; wuxuu sidoo kale ka digayaa dhibaatooyinka dadkii horay Pakistan wax ku soo bartay ama inta haatan ku barataaba ay muteen.
Waa xaqiiqo aan la dafiri karin ah in dhallinta dalka ku sugan u baahan yihiin xog dhameystiran oo ay ku saleeyaan go’aannadooda, waayo Soomaalidaa horay u tiri “War la helaaba talo la hel”. Waxaa kaloo jira waalidiin Ilaah u deeqay oo heli kara inay ubadkooda waxbarasho jaamacadeed ka bixiyaan, balse aan haysan warbixin lagu kalsoonaan karo. Ka sokow fursadahaasi, waxaa in la iftiimiyo u baahan dhibaatooyinka soo noqnoqda si la isugu dayo in laga hortago.
Warbixintan hay’ad ama cid gaar ah oo taageero dhaqaale ka geysatay ma jirto ee waa dadaal shakhsiyeed iyo iska xil-saarid howl aan aaminsanahay inay ardey Soomaaliyeed ka faa’iieysan karaan. Maadaama qoruhu uusan arrimaha waxbarashada ku takhasusin, wuxuu qirsan yahay in arrintan looga faro-dhuudhuuban yahay, hase yeeshee waxay warbixintan kaalmeyn kartaa qof kasta oo doonaya inuu ballaariyo mashruucan si looga dhigo barnaamij wax tara ardeyda Soomaaliyeed.
Xulashada xirfadda kugu habboon
Caadi ahaan carruurtu waxay is weydiiyaan su’aasha ah “maxaad jeclaan lahayd inaad noqoto markaad weynaato?” Qaarba wax bay ku jawaabaan, waxaase u badan hadba waxyaabaha ilmuhu ka arko aabe, adeer, abti ama deegaanka kale.
Qoraaga weyn ee caanka ah Dale Carniege ayaa ku qoray buuggiisa “How to stop worrying and start living” in qofka dhallinyarada ah, rag iyo dumar kuu yahayba, uu soo maro xilli uu noloshiisa ugu welwel iyo walbahaar badan yahay, kolkaas oo ah markuu ka qalin jebiyo dugsiga sare, asiise aanu billaabin jaamacadda. Walbahaarkaas labo dhinac ayuu kaga soo faruurmaa: kan koowaad, ahna kan warbixintan khuseeya, wuxuu kaga welwelaa siduu jaamacad ku heli lahaa, hadduu helana wuxuu xirfad ahaan u baran lahaa. Welwelka labaad ayuu qoruhu ku sheegay inuu yahay mid ah qofkii uu nolosha la wadaagi lahaa, mustaqbalkiisana uu ku aamini lahaa; si kale haddii loo dhigona xaaska/seyga ay wada noolaan lahaayeen. Labaduba waxay ka siman yihiin inay yihiin go’aanno adag oo raad weyn ku yeesha aayaha dambe ee qofka, kuwaasoo haddii lagu hungoobana reeba mahadhooyin taariikhdiisa ama taariikhdeeda gala
Sidaasi darteed ayaa xulashada xirafadda kugu habboon u tahay go’aan aan sahlaneyn. Qaar ka mid ah culimada waxbarashada waxay sheegaan 6 qodob oo ay tahay in la tixgeliyo marka la xulanayo xirafadda, waxayna kala yihiin:
1. Sooyaalka Qoyska (Family Background)
Qaab-dhismeedka iyo sooyaalka (taariikhda) qoyska ardeygu ka dhashay waxay saameyn ku leeyihiin wuxuu ardeygu xirfad ahaan u dooran lahaa. La yaab ma laha inaad aragto aabe dhaqtar ama injineer ah oo ubadkiisa u xulaya xirafadda uu soo bartay, weliba tiro ka badan hal qof qoyska kaliya, waxaase taasi loo aaneyn karaa iyadoo aabuhu af-garanayo kulliyaddaas, uuna aad ugu ammaano wiilkiisa ama gabadhiisa.
2. Maaddooyinkii uu Dugsiga Sare ku Xiiseyn Jiray
Maaddooyinka ardeygu ka xiiseyn jiray dugsigiisa sare waxay fure u noqon karaan xulashada xirafadda uu u weecan lahaa. Hadduu ka heli jiray maaddada xisaabta amaba sayniska kale waxaa u wanaagsan inuu kulliyad saynis ah galo, hadduusan ka heli jirina waxaa habboon inuu dhinaca adabka (arts) u leexdo.
3. Hab-Dhaqanka Qofka
Dalalka horumaray ee adeegga la-talinta si caadi ah looga heli karo, waxaa ardeyga la sii odorosaa intuu ku jiro xannaanada carruurta ee ka hor dugsiga. Tusaale ahaan waxaa ardeyga loo sahlaa dhammaan wax kasta oo xirfad la barto u taagan, mana jireyso wax lagu qasbayo inuu sameeyo. Wuxuu ilmo kastaaba toos u abbaarayaa waxa uu jecel yahay inuu ku cayaaro. Tusaale qaar baa ka hela inay guryo dhisaan oo dhoobo ama alwaax isku kabaan, qaar inay baabuur silig ka sameeyaan, kuwa kalena inay carruurta kala agaasimaan. Sidaas ayaa lagu sii saadaalin karaa hadba halka ay carruurta yari ku fiicnaan doonaan mustaqbalka.
Qof walba markuu soo garaadsado wuxuu nolosha ka yeeshaa yididiilo uu qalbiga ku hayo. Qofba waa nasiibkiise, dadka qaar way u dhabowdaa yididiiladooda, qaarna rajadaas ma dhaafto. Waxay taariikhyannada qaarkood sheegaan in Naabiliyoonkii xukumayay Faransiiska uu sheegan jiray isagoo yar inuu Faransiiska u talin doono. Korneel Qaddaafiga Liibiya ayaa isna la sheegaa in, isagoo ardey ka ah jaamacad ku taalla dalka Masar, kadib markii dalkiisa laga soo masaafuriyay, uu sariirtiisa ku qoran jiray inuu yahay “Hoggaamiyaha Liibiya”. Waa hubaal in riyo-maalmeedku marar badan run noqoto, waase haddii dadaal la raaciyo.
5. Is-Qiimeyn Daacad ah
Qof kasta wuu yaqaannaa wuxuu galo iyo wuxuu gudaba, wuxuu qaban karo iyo wuxuusan qaban karin, wuxuu baran karo iyo wuxuusan baran karinba. Haddiise qofku naftiisa buunbuuniyo ama is liido, wuxuu labada goorba ku dambeyn doonaa inuu hungoobo. Sidaasi darteed ayay ardeyda la gudboon tahay inay waalidkood si saraaxad leh ugu sheegaan nooca waxbarasho ee ay ka soo bixi karaan iyo kuwa aysan ka soo bixi karin halkii ay naftooda iyo waalidkoodba khasaarooyin u soo jiidi lahaayeen.
Talooyin ku Aaddan Xulashada kulliyadda
Daraasad lagu sameeyay qaar ka mid ah ardeyda Soomaaliyeed ee dalka Pakistan wax ku barata ayaa laga soo saaray in 62% ardeyda ay iyagu xusheen kulliyadda ay dhigtaan, halka 29% ay waalidkood u xuleen, iyadoo 9% kaliya ay isaga soo baxday. Waxaa hoosta laga xarriiqay in ardeyda ay jaamacadda isaga soo baxday iyo kuwa waalidkood u xuleenba ay ugu badnaayeen kuwa aan si aad ah ugu qanacsaneyn waxa ay baranayaan.
Ka hor intaan la xulan xirfadda, waxaa habboon in la qaato tallaabooyin hordhac ah. Waxaa waalidka laga doonayaa inay wada-tashi la sameeyaan asxaabta qoyska ee waayo-aragnimada u leh arrimahaas. Qoraaga Dale Carniege ayaa isla buuggiisa (how to stop worrying and start living) ku qoray talo ku aaddan arrintan, wuxuuna sheegay in marka ardeygu ay ku soo dhacdo inuu xirfad cayiman yeesho uu marka hore la tashadaa dadka xilligaas ka shaqeeya xirfaddaas.
Tusaale hadduu damacsan yahay inuu dhaqtarnimo ama injineernimo soo barto waa inuu u tagaa dhowr ka mid ah dhaqaatiirta ama injineerrada ugu caansan deegaanka uu ku nool yahay, ee weliba muddo fog ku soo shaqeynayay xirfaddaas, waana inuu weydiiyaa su’aalan:
* Sideed u aragtaa xirfaddan aad ku shaqeyso?
* Maxaadse kula talin lahayd qofkii doonaya inuu soo barto xirfaddan?
* Ma aaminsan tahay in go’aankii aad ku gaartay aad xirfaddan soo barato aad ku saxsaneyd?
* Haddiise aad maanta booskeyga joogi lahayd oo ardey hadda jaamacad billaabaya ahaan lahayd ma soo baran lahayd xirfaddan?
Macallimtiinta dugsigii aad soo dhigan jirtay waa il muhiim ah oo aad la-talin fiican ka heli kartid. Qiyaastii bil ka hor intaan magaalada Muqdisho ka soo tegin ayaan la-tashi iyo dardaaran ugu tegay maamulihii dugsigii sare ee aan ka soo baxay, ahaana macallinkii maaddooyinka joqoraafiga iyo taariikhda. Sheeko dheer kadib ayuu macallinkeygii igula dardaarmay inaanan soo baran maaddo saynis ah oo midkuu ahaadaba aan adab (arts) soo barto. Runtii markaas wuxuu i siiyay sababo macquul ah oo uu iigula talinayay inaan arts soo barto. Haddiise aadan meel ku ogeyn macallin wax kuu dhigi jiray oo shakhsi ahaana ku yaqaanna waxaad talo ka qaadan kartaa macallin waayo-arag ah kan ugu dhow ee aad heli karto adigoo xaalkaaga si hagar la’aan ah kaga warramaya.
Markaad aragto inaad u janjeerto barashada xirfad gaar ah is weydii su’aalaha soo socda:
* Miyaan soo qaatay maaddooyinka dugsiga sare ee aasaaska u ah kulliyaddaas?
* Awood ma u leeyahay inaan dhabarka u rito mas’uuliyadaha ku lammaansanaan doona xirfaddaas?
* Ma ku faraxsanaan doonaa inaan howlahaas oo kale qabto?
* Hal-abuurka iyo kartidayda kale ma uga faa’iideyn karaa xirfaddan?
* Xirfaddaas ma qancin kartaa baahideyda?
* Mise waalidka unbaan raalli gareynayaa?
* Ma jiraan fursado wanaagsan oo xirfaddaas u leedahay mustaqbalkayga dhow iyo kan fogba?
* Sideen xirfaddaas ugaga faa’iideyn karaa dadkeyga, dalkeyga iyo nafteydaba?
* Waa noocee dadka aan la shaqeyn doono?
* Illaa heerkee ugu sarreeya ayaan ka gaari karaa xirfaddaas?
Waa inaad awood u leedahay inaad soo dhufato xirfadda kugu habboon. Waxaa la xaqiijiyay in dadku badankiis ay ku habboonaan karaan illaa dhowr xirfadood inay ku shaqeeyaan, kan qofku doortana waa mid isaga ku xiran isagoo duruufo badan qiimeynaya.
Xulashada Jaamacad wanaagsan
Kadib markaad go’aan ka gaarto xirfadda aad jeclaan lahayd inaad barato waxaad ogaataa inaad ka gudubtay caqabaddii ugu weyneyd. Tallaabada xigta waxay noqon kartaa: halkee ayaan ka bartaa? Haddii jaamacaddu tahay mid aad adiga iska bixineysid, waxaa habboon in jaamacadda aad galeyso aad ka fiiriso dhinacyadan:
Sumacadda iyo magaca jaamacadda/machadka aad galeyso waa mid xaddideysa qiimaha ay shahaadadaadu yeelan doonto. Walow lagu weydiin doono waxaad taqaanno marka tartan shaqo yimaado, haddana shahaadadu waxay kaa kaalmeyn kartaa inaad ka soo gudubto wareegga 1aad oo laga yaabo in dadka qaarkiis ku haraan arrimo shahaadadu tahay sababta ugu weyn.
2. Tirada sanadaha:
Imisa sano ayaa lagu qaadan karaa shahaadada bachelor ama master hadba kii aad dooneyso ama labadoodaba, sidee ayayse fasaxyadu u kala habeysan yihiin?
3. Aqoonsiga jaamacadda:
Illaa iyo heerkee ayaa la aqoonsan yahay jaamacadda aad galeyso, shahaadada ay bixisana ma ka soconeysaa caalamka intiisa kale. Dalalka Koonfur Aasiya sida Pakistan, India, Bangaladesh, iyo kuwa kaleba waxaa ku badan jaamacadaha aan dowladda u diiwaan gashaneyn, sidaasi darteed iska fiiri in jaamacadda la aqoonsan yahay iyo in kale. Haddii aad dooneyso ogaanshaha jaamacadaha Pakistan ee ay dowladdu aqoonsan tahay, waxaad ka ogaan kartaa Hay’adda tacliinta Sare ee Pakistan (Higher Education Commission), horayna loo yaqiinnay UGC, ama web site-ka (www.hec.gov.pk)
4. Manhajka waxbarasho:
Muxuu yahay barnaamijka waxbarasho ee jaamacadda; maxay yihiin koorsooyinka lagu qaadanayo iyo qawaaniinta la xiriira, sidee ayayse ugu kala qeybsan yihiin xilliyo-waxbarashadeedka jaamacadda.
Manhaj cinwaanno macaan isaga iskuma kaa sharraxayo, ee isku day inaad macluumaad ka hesho heerka waxbaridda macallimiinta jaamacadda, adigoo xuuraansan kara qaar ka mid ah ardeyda haatan dhigata ama kuwii dhowaanahaas ka qalin-jebiyayba.
Waa intee qiimaha guud ahaan takhasuska aad dooneyso, xilliyadee ayaana lacagta la kala bixin karaa, mana jiraa wax qiimo-jebin loo sameynayo ardeyda (discount).
Hadaan ahay adrdey soomaaliyeed oo heysan wax sharci sideen ku raadsankaraa jaamacad?